चीन Heany कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Aumax
घर > उत्पादनहरु > प्लास्टिक Granulator र श्रेडर > भारी शुल्क प्लास्टिक Granulator > Heany कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू
1. Heany कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू परिचय
Aumax AMG-SH श्रृंखला भारी शुल्क प्लास्टिक Crushers मुख्य रूप मा ठूलो आकार प्लास्टिक बर्बाद सामाग्री, जस्तै 200L रासायनिक ड्रम र रासायनिक बैरल, ठूलो व्यास पीवीसी पाइप र पाइप फिटिंग, अटोमोबाइल को बम्पर, ठूला प्लास्टिक कन्टेनर र बक्स को granulating र पुनर्चक्रण को लागी प्रयोग गरीन्छ, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलिभिजन, ठूला प्लास्टिक ब्लक र ढु्गा, थर्मोफर्मिंग पाना रोल, आदि को भारी भाग प्लास्टिक रोटर शाफ्ट को ठूलो व्यास संग सुसज्जित भारी कण प्लास्टिक granulating मिसिन, कुचल कोठा को ठूलो आयाम र इन्जिन को ठूलो शक्ति, त्यसैले granulating मेशिनहरु ठूलो उत्पादन क्षमता संग ठूलो सामाग्री क्रश गर्न सक्नुहुन्छ।
2. भारी कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू पैरामीटर (निर्दिष्टीकरण)
मोटर + हूपर र पर्दा को लागी पेंच लिफ्टिंग
1ï¼ ‰ उत्पादन क्षमता पर्दा व्यास, सामग्री गुणस्तर र खुवाउने आवृत्ति मा निर्भर गर्दछ।
4ï¼ power मानक बिजुली आपूर्ति 3Ø380V 50Hz छ। अन्य बिजुली आपूर्ति उपलब्ध छ।
3. Heany कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू सुविधाहरु र आवेदन
एल ठूलो आकार रोटर शाफ्ट र काट्ने कोठा उच्च दक्षता र बलियो शक्ति संग मेशिन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
एल बाहिर निर्मित बियरिंग्स धूल टाढा र कम गर्मी काम गरीरहन्छ।
एल वी आकार को डिजाइन ब्लेड संरचनाएक उच्च काटने दक्षता बीमा
एल इलेक्ट्रिक मोटर पेंच प्रणाली / कुचल कक्ष र स्क्रिन कोठा बन्द / बन्द गर्न को लागी प्रणाली।
l चैम्बर र स्क्रिन कोठा काट्ने को लागी अलग संरचना डिजाइन, सफा गर्न र मर्मत गर्न सजिलो
l मानिसहरु र प्लास्टिक कोल्हू मिसिन को सुरक्षा को लागी पूरा सुरक्षा प्रणाली।
l वैकल्पिक ब्लोअर कन्वेयर र धूल grinded सामाग्री र धूल पृथकीकरण को छिटो संग्रह को लागी प्रणाली स्कलन।
4. Heany कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू विवरण
AMG-SH श्रृंखला भारी शुल्क प्लास्टिक रिसाइक्लिंग कोल्हू मेसिन इलेक्ट्रिक मोटर + स्क्रू प्रणाली को लागी क्रशिंग चैम्बर खोल्न र बन्द गर्न अपनाउँछ। उच्च दक्षता संग ठूलो शक्ति मोटर, यूरोपीय प्रकार granulating कोठा र ब्लेड संरचना को उन्नत डिजाइन, बिजुली भागहरु को अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध ब्रान्ड मेशिन ठूलो क्षमता र उच्च दक्षता संग काम स्थिर बनाउन।
5. Heany कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू योग्यता
सामान्यतया, हाम्रो प्लास्टिक मिसिनहरु को वितरण समय १०-२० दिन अर्डर पुष्टि र अग्रिम भुक्तानी पछि हो। हाम्रा उत्पादनहरु को अधिकांश प्लाईवुड मामलाहरुमा प्याक गरीन्छ। भ्याकुम Autoloaders जस्तै साना मिसिनहरु को लागी नालीदार अवस्थामा प्याक गरीएको छ। सामान्यतया, हामी LCL वा FCL महासागर ढुवानी द्वारा ठूला मिसिनहरु जहाज। कहिलेकाँही, ग्राहकहरु लाई तत्काल मेशिन को आवश्यकता छ, हामी हावा वा एक्सप्रेस बाट मेशिन जहाज।
हट ट्याग: Heany कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, चीन, गुणस्तर, सीई, उन्नत, किन्नुहोस्, मूल्य